Amụma Nzuzo | Martech Zone
Ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ọ bụla ma ọ bụ nwee ajụjụ ọ bụla gbasara iwu nzuzo anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Na Martech Zone, nzuzo nke ndị ọbịa anyị dị oke mkpa nye anyị. Usoro iwu nzuzo a na-akọwapụta ụdị nke ozi nkeonwe natara ma nakọtara site na Martech Zone na otu esi eji ya.
Dị ka ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ, Martech Zone na-eji nke log faịlụ. Ihe ọmụma dị n'ime faịlụ log gụnyere adreesị intaneti (IP), ụdị ihe nchọgharị, onye na-eweta ọrụ ịntanetị (ISP), stampụ ụbọchị / oge, peeji nke / ụzọ ọpụpụ, yana ọnụọgụ nke iji nyochaa usoro, nye saịtị ahụ, soro usoro onye ọrụ gburugburu saịtị ahụ, ma kpokọta ozi igwe mmadụ. Adreesị IP, na ozi ndị ọzọ dị otú ahụ enweghị njikọ na ozi ọ bụla nwere ike ịmata n'onwe ya.
Martech Zone na-eji kuki iji chekwaa ozi gbasara mmasị ndị ọbịa, dekọọ ozi akọwapụtara onye ọrụ nke ibe ndị ọrụ na-enweta ma ọ bụ gaa, hazie ọdịnaya peeji nke weebụ dabere na ụdị ihe nchọgharị ndị ọbịa ma ọ bụ ozi ndị ọzọ onye ọbịa ahụ na-eziga site na ihe nchọgharị ha.
Google, dịka onye na-ere ahịa nke atọ, na-eji kuki iji nye mgbasa ozi Martech Zone.
Ojiji Google nke kuki DART na-enyere ya aka iji mgbasa ozi nye ndị ọrụ dabere na nleta ha Martech Zone ye mme ikpehe eken ke Intanet.
Ndị ọrụ nwere ike ịpụ na ojiji nke kuki DART site na ịga na mgbasa ozi na ọdịnaya Google iwu nzuzo nzuzo
Offọdụ ndị mmekọ mgbasa ozi anyị nwere ike iji kuki na mgbama weebụ na saịtị anyị. Ndị mmekọ mgbasa ozi anyị gụnyere Google Adsense, Commission Junction, Clickbank, Amazon na ndị mmekọ ndị ọzọ na ndị nkwado.
Martech Zone enweghị ohere ma ọ bụ na-achịkwa kuki ndị a na-eji ndị mgbasa ozi ndị ọzọ.
Ikwesiri ighota atumatu nzuzo di iche iche nke sava ndi a maka ihe omuma karie omume ha tinyere ntuziaka banyere otu esi apu omume ufodu. Martech ZoneIwu nzuzo anaghị emetụta, anyị enweghị ike ijikwa ọrụ nke, ndị mgbasa ozi ndị ọzọ ma ọ bụ weebụsaịtị.
Ọ bụrụ na ị achọ iji gbanyụọ kuki, i nwere ike ime otú site na gị onye nchọgharị nhọrọ. More ọmụma zuru ezu banyere kuki management na kpọmkwem ihe nchọgharị weebụ nwere ike na nchọgharị 'iche weebụsaịtị.